नेकपा अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई भेट्न भैँसेपाटीमा « News24 : Premium News Channel
नेकपा अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई भेट्न भैँसेपाटीमा
काठमाडौं, २० साउन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई भेट्न भैँसेपाटी पुग्नुभएको छ । प्रचण्डले गौतमसँगको भेटमा कुन बिषयमा छलफल गर्नुहुने भन्नेबारे जानकारी नभएपनि समसामयिक राजनीतिक बिषयमा छलफल केन्द्रीत हुने अनुमान गरिएको छ । साथै आज बेलुका ५ बजे प्रधानमन्त्री समेत रहनभएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग हुने छलफलको तयारी हुनसक्ने छ ।
अध्यक्ष प्रचण्ड मध्यान्न भैसेपाटी पुग्नुभएको उपाध्यक्ष गौतम निकट स्रोतले जनाएको छ । पार्टीको बिवादको विषयमा अध्यक्ष प्रचण्डको पक्षमा रहेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम एकाएक प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका केपी ओली पक्षमा लागेपछि नेकपा विवादले फरक धार लिएको छ ।
केहीदिन अघि उपाध्यक्ष गौतमले पार्टी जोगाउने उपाय भन्दै ६ बुँदे प्रस्ताब लिखित रुपमा प्रस्तुत गर्नुभएकाे थियो । त्यो प्रस्ताब प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रत्यक्ष सहयोग मिल्ने र समर्थनमा छ । यसपछि आ-आफ्नो पक्षमा तान्न गौतमलाई ओली र प्रचण्डले निरन्तर भेटघाट गर्दै आउनुभएको छ ।
६ बुँदे प्रस्ताव जारी गर्नुभएको दिन नै प्रधानमन्त्री ओली गाैतमलाई भेट्न भैँसेपाटी पुग्नुभएको थियो । त्यसपछि अधयक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र संसदीय दलका उप नेता सुवास नेम्बाङसहितका नेता लिएर बालुवाटार पुग्नुभएको थियो । तर त्यो बैठक पनि फलदायी हुन सकेन । पार्टी र सरकार संचालनमा ओली असफल भएको भन्दे अध्यक्ष प्रचण्ड, बरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनालसहितका बहुमत नेताहरुको मागपछि नेकपामा संकट पैदा भएको छ ।
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले १४औं महाधिवेशनको प्रचार ब्यानर सार्वजनिक गरिएको छ । केन्द्रीय प्रचार प्रसार
राप्रपा महाधिवेशन : लिङदेन र थापाले बनाए प्यानल !
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को एकता महाधिवेशन बुधबार (हिजो)बाट सुरु भएको छ । काठमाडौंको
कांग्रेसको उम्मेदवार बन्न कति गाह्रो ?
मंसिर । गण्डकी प्रदेश अधिवेशनले तोकेको उम्मेदवारी शुल्कमा मनपरी भएपछि अहिले त्यसको विरोध भइरहेको छ
धनुषा । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले आगामी निर्वाचनपछि प्रदेश र देशमा कांग्रेसको बहुमतको सरकार
‘ए’ डिभिजन लिग फुटबल : आजदेखि तेस्रो चरणका खेल सुरु हुँदै
भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ को मूल्य घटेर आयो, तर नेपालले नघटाउने (विज्ञप्तिसहित)